फ्लैश तपाईं पृथ्वीमा सबैभन्दा छिटो मानिस रूपमा शहर सवारी तपाईं लिन्छ कुख्यात अपराधी देखि सभ्यता सुरक्षित गर्न त्यहाँ छ. बैरी एलन को वर्ण डीसी हास्य र अमेरिकी हास्य श्रृंखला को सबै भन्दा प्रसिद्ध वर्ण को छ. कप्तान शीत, दर्पण मास्टर, र गोरिल्ला Grodd खेल मा अपराधीहरूलाई रूपमा चित्रित छन् र तिनीहरूलाई प्रत्येकले स्लट भर धेरै रोचक बोनस सुविधाहरू प्रदान.
यो अद्भुत स्लट को निर्माता NextGen गेमिङ छ. कम्पनी को विकास र पछि क्यासिनो खेल खेल सफ्टवेयर डिजाइन मा छ 1999. Games like फ्लैश आफूलाई उद्योग मा प्रमाणित. कम्पनी सधैं स्लट खेल को मूल कुराहरू गर्न टाँसिएको गर्दा मजा-भरिएको आफ्नो खेल बनाउने नयाँ र रोमाञ्चक तरिका को सोच गरेर आफ्नो व्यावसायिक भवन तिर प्रयास छ. कम्पनी बेलायत जुवा आयोग द्वारा नियमन छ.
अधिक डिजाइन5रील, फ्लैश प्रस्ताव 50 paylines. जंगली बोनस प्रतीक हो फ्लैश प्रतिमा जो बाहिर एउटा 3x गुणक तपाईंलाई लागि विजेता संयोजन चित्रकला गर्नाले. यो ध्रुवीय प्रतीक बिजुली को अर्को फ्लैश प्रतिमा छ. यो बोनस र जङ्गली प्रतीक र प्रस्ताव बाहेक अन्य सबै प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ 5000 सिक्का तपाईं विजेता payline तिनीहरूलाई दुई ठाँउ व्यवस्थापन भने.
The feature of bonus bets in the game brings more wild symbols and hence more winning combinations are up for grabs. तिनीहरूले आफ्नो सबै जीत एक 5x गुणक प्रस्ताव. निःशुल्क spins तर तपाईं आफ्नो जीत को लागि एक 10x गुणक दिन जीत. अन्य प्रतीकहरू मानक कार्ड प्रतीक हो. अन्य रोचक सुविधाहरू बीचमा Wilds र Rogue गरेको सुविधा छन्. प्राप्त3वा बढी बोनस को रील मा बोनस बाजी सुविधा समयमा प्रतीक, तपाईं कप्तान शीत गर्न accustomed भइरहेका छन्, गोरिल्ला Grodd , र ऐना मालिकका सुविधा. कप्तान शीत एक मुक्त पुन स्पिन संग विस्तार wilds चिसो प्रदान गर्दछ. गोरिल्ला Grodd, तर, तपाईं अनियमित teleporting wilds सुविधा दिन्छ र ऐना मास्टर तपाईं आफ्नो अन्तिम जानुभए बनाउँछ4मुक्त spins.
यो स्लट मा रोचक सुविधाहरू को प्रशस्त देख, फ्लैश बजार मा एक ठूलो हिट छ. त्यसैले, प्राप्त एक विजेता spree लागि सेट! तपाईं अचम्मको तस्विर गुणस्तर द्वारा स्वागत गर्दै, यो स्लट मा आश्चर्यजनक ध्वनि र असाधारण ग्राफिक्स. तपाईं अचम्मको 3D ग्राफिक्स र विशाल पाठ्यक्रम jackpots प्रेम गर्न बाध्य छन्, त्यसैले तपाईं पक्कै थप प्रतीक्षा गर्न सक्दैन!